Ungayenza kanjani i-fidget spinner | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Emasontweni ambalwa edlule, kubonakele amagajethi anelukuluku asesimweni senkanyezi ekhonjiwe amathathu ezimpilweni zethu ezijikeleza kuphela, sengathi zaziphotha iziqongo kodwa zinomumo ohlukile. Izingane hhayi kanjalo izingane ziye zahlatshwa umxhwele yile gajethi ebizwa I-Fidget Spinner. Lawa maFidget Spinner ayimfashini yonyaka ezinganeni zesikole kodwa futhi ayithoyizi eliwubuwula kubantu abadala abaningi.
Ezinsukwini zakamuva le ndlela yakha izinkulungwane zama-euro, kepha abaningi bathi le "fashoni" ayinjalo njengoba igajethi yeFidget Spinner ibivele ikhona iminyaka, kepha Yini ngempela i-fidget spinner? Yiziphi izinhlobo zeFidget Spinner ezikhona? Singakwazi ukuzakhela igajethi enjalo?
1 Yini amaFidget Spinner?
2 Yiziphi izinhlobo ezikhona zeFidget Spinner?
3 Ngingayithola kanjani i-Fidget Spinner?
4 Ngingayakha kanjani i-Fidget Spinner eyenziwe ngokwami?
Yini amaFidget Spinner?
I-Fidget Spinner noma i-Spinner nje eyi- ithoyizi eliqeda ukucindezeleka elenziwe nge-shaft emaphakathi equkethe ibheringi eyodwa noma ngaphezulu nokuthi izingalo ezimbili noma ezintathu ziphuma eksisi emaphakathi ephela ngamabhere ngamunye. Izinto zala ma-fidget spinner zingahluka kakhulu yize okuvame kakhulu ukuthola ama-spinner enziwe ngepulasitiki noma ngezinto ezifanayo.
Leli thoyizi eliqeda ukucindezeleka wazalwa ngo-1993 ngenxa konjiniyela wamakhemikhali owayenenkinga yokuxhumana nendodakazi yakhe ngenxa yokugula. Lo njiniyela ubizwa ngoCatherine Hettinger. Futhi yize iningi lethu lingacabanga ukuthi njengamanje ungomunye wabantu abacebe kunabo bonke emhlabeni, iqiniso ukuthi akayona le nto ngoba ilungelo lobunikazi lamlahla eminyakeni edlule. Ngemuva kwalokhu, izikhungo eziningi zezokwelapha zisebenzise lokhu "ukuphotha phezulu kwesandla" njengethuluzi ukusebenza nezingane kanye / noma nabantu abane-autism, ukunakekelwa kokunakwa, ukucindezeleka, ukukhathazeka noma ukucindezeleka.
Yiziphi izinhlobo ezikhona zeFidget Spinner?
Njengamanje kunezinhlobo eziningi zeFidget Spinner, ngoba ngaphezu kokuba yimfashini, iphinde ibe yinto yomqoqi. Ngokuvamile, ukwenza umehluko phakathi kwamamodeli, abasebenzisi bavame ukuthatha izinto ezimbili: uhlobo lwento nokuthwala. Mayelana nalokhu okubalulekile, kufanele sisho ukuthi ama-spinner ensimbi abhekwa njengama-high-end, anama-bearings amahle futhi aqedile ngamaphrofayili. Bese kuzoba khona ama-spinner epulasitiki, lawa ma-spinner yiwona avame kakhulu futhi lawo anama-bearings amabi. Akuwona umthetho ojwayelekile, okungukuthi, kungahle kube nesipina sepulasitiki esinamabheringi amahle kakhulu, kepha futhi kunamamodeli "amabi" aneziphetho ezimbi namabherethi amabi enza isipiliyoni nge-spinner singabi sihle kangako. Kumele kugcizelelwe lokho ingxenye ebaluleke kakhulu yesipina se-Fidget is the bearing. Ngokuya ngohlobo lokuthwala i-Fidget Spinner enalo, i-spinner izoba sezingeni eliphakeme noma eliphansi ngakho-ke izoba nentengo ethe xaxa noma encane. Vuliwe Izindaba zamagajethi Unomhlahlandlela wamamodeli we-Fidget Spinner kanye nesixhumanisi sokwenza imodeli ngayinye ikhonjiswe.
Ngingayithola kanjani i-Fidget Spinner?
Okwamanje kunezindlela ezimbili zokuthola i-Fidget Spinner: Kuphakathi kokuthi sithenga enye yalezi zipikili noma sizakhela thina. Njengoba sikuFree Hardware, into ejwayelekile ukuthi sikhetha le nketho yokugcina, esizokhuluma ngayo ngokuningiliziwe, kodwa ngaphambi kwalokho sizoma kwiFidget Spinner engathengwa.
Impumelelo yethoyizi ibilokhu ukuthi i-Fidget Spinner iziphathe ezindaweni eziningi njengegolide uqobo. Okusho ukuthi, inenani eliguquguqukayo ngokuya ngesitoko, inani lezindawo ezithengisayo, njll. intengo ejwayelekile yama-euro ama-3 kepha ifinyelela inani lama-euro ayi-10 endabeni yezinsuku noma amahora. Iqiniso eliqhubeka nokudonsa ukunaka kwabaningi, hhayi kuphela ngenxa yemiphumela ekhiqizwa yiFidget Spinner kodwa futhi nangenxa yalolu shintsho entengo nasekuthengisweni okubangelwa yilo.
Manje singahlala sakha i-Fidget Spinner yethu. Uma sikhetha le nketho, inketho engiyithandayo impela, sinezindlela ezimbili zokwenza: noma sisebenzisa izinto ezenziwe kabusha futhi sakhe i-Fidget spinner okungekho omunye umuntu ozoba nayo; Kulungile sikhetha i-Free Hardware ukwakha i-Fidget Spinner yomuntu siqu ukuthi akekho omunye umuntu ozoba nayo kepha lokho kuzoba nokuphela “kwezimboni” uma kuqhathaniswa nokwakhiwa kwamakhaya.
Ngingayakha kanjani i-Fidget Spinner eyenziwe ngokwami?
Ukwakha i-Fidget Spinner kuyinto elula ukuyenza. Okokuqala kufanele sithole ukwakheka kwe-spinner, singakwenza lokhu ekhadibhodini, ezinkuni, kupulasitiki oqinile, njll. Ngemuva kwalokho sisebenzisa amabheringi esingawathenga kunoma yisiphi isitolo sehadiwe. Isidingo okungenani ukuthwala okukodwa, lokhu kuzoba engxenyeni emaphakathi yesipina.
Kepha singasebenzisa futhi ama-bearings ekugcineni kwe-spinner, yebo, uma sisebenzisa ama-bearings emaphethelweni kufanele siwasebenzise kuzo zonke izinhlangothi, akufanelekile ukuwasebenzisa kuphela ekugcineni. Kuhle futhi ukusebenzisa ama-washer lapho sizobeka khona umunwe lapho i-Fidget spinner ijikeleza. Ngezansi sifaka ividiyo yokuthi ungayakha kanjani i-spinner esenziwe ekhaya, kuvidiyo singabona ukuthi i-spinner yakhiwa kanjani igxathu negxathu.
Kepha ukwakha nge-Free Hardware kunikeza imiphumela engcono. Empeleni, ukwakhiwa ngokusebenzisa ukuphrinta kwe-3D kunikeza okufanayo kodwa ngokuqeda okungaphezulu kobuchwepheshe, ukwazi ukudlula ku-spinner esithengiwe uma kungenjalo.
Ngokwakhiwa kwesipina ngokusebenzisa ukuphrinta kwe-3D empeleni sizodinga izinto ezimbili: iphrinta ye-3D ene-PLA noma i-ABS namabhere. Uma sinezinto ezimbili, kufanele siye endaweni yokugcina izinto bese silanda imodeli ye-spinner esiyifunayo (uma sisebenzisana kakhulu ne-Autocad singayakha futhi ngaleli thuluzi).
Uma sesinemodeli, Siyiphrinta ngephrinta ye-3D futhi ngemuva kokuqeda sifaka amabheringi. Lezi zinhlobo zamabheringi nazo zisetshenziswa ngabaphrinta be-3D, ngakho-ke ukubhangqa lezi zinto singasebenzisa umthombo wokushisa onjenge-welder. Ukupha ukushisa okuncane engxenyeni yepulasitiki kuzokwenza kube lula ngathi ukufaka amabheringi.
Amamodeli we I-Fidget Spinner ikhona ezindaweni zokugcina ezaziwa kakhulu ze-3D ku-Intanethi. Kuzo singathola ifayili leFidget Spinner esilithandayo, sililande bese siliphrinta. Kepha izinqolobane zifanelwe ukubalulwa okukhethekile into ehlukile y Yeggi.
Lezi zinqolobane sezivele zinamakhulu e ngisho nezinkulungwane zamamodeli we-spinner esingazilanda futhi siziphrinte endlini yethu. Okuhlelekile futhi inamamodeli we-spinner, kepha ngezinga elincane. Uma simusha ngempela emhlabeni wokuphrinta kwe-3D, okungenzeka ukuthi Instructables yindawo yakho yokugcina ngoba ngaphezu kokuqukethe ifayili lokuphrinta, liqukethe umhlahlandlela onezinyathelo okufanele uzilandele ukwakha i-spinner.
Kunamamodeli nezinhlobo eziningi ze- "spinner", kepha iningi lazo lingakhiqizwa yithi ekhaya noma ngephrinta ye-3D. Imvamisa ngikhetha izindlela ezishibhile ngoba akuwona wonke umuntu onemali angayisebenzisa, kepha kulokhu, ngicabanga inketho engcono kakhulu yokwakha i-fidget spinner ukusebenzisa iphrinta ye-3D nefayela elivela endaweni ethile efana ne-Thingiverse.
Umphumela uba isipina sokuqala, esingabizi kakhulu esinokuqedela kobuchwepheshe. Kuyiqiniso ukuthi akuwona wonke umuntu onephrinta ye-3D esandleni, kepha unga-oda ingxenye ngezinsizakalo zokuphrinta ze-3D noma ukhethe ukwakha ngezinto ezenziwe kabusha, enye indlela engeyona eyongoti. Unquma, kepha ukwakha iFidget Spinner kumnandi kakhulu kunokuzithenga Awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » I-Fidget Spinner, ithoyizi esingalakha